संविधान संशोधनको कुरा अब प्रम केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय हो | Ratopati
मधेशको राजनीति अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छ : राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर १२, २०७६ chat_bubble_outline1
देशको सबभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको छ । त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकार क्रियाशील छन् । त्यही बीचमा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीहरु परिवर्तन गर्नुको साथै मन्त्रीहरु पनि हेरफेर गरे । यही बीचमा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले ठूलो तरङ्ग ल्यायो । यिनै सेरोफेरोमा देशको राजनीति कता गइरहेको छ, मधेशको राजनीति कुन विन्दुमा छ लगायतका विषयमा मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साहसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः
पछिल्लो समय केन्द्रीय राजनीतिमा एकपछि अर्का घटनाहरुले एकप्रकारको हलचल नै ल्याइरहेको छ । ती घटना स्वाभाविक थिए कि अस्वाभाविक?
मलाई अस्वाभाविक लागेन । आज केपी शर्मा ओली सर्वाधिक शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ । लगभग दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । पार्टीमा पनि एकछत्र शासन चलाइरहनुभएको छ । विगतमा मधेशमा प्रवेश नै गर्न नदिने भन्नेहरु (उपेन्द्र यादव) सरकारमा सहभागी छन् । अझ सबभन्दा बढी केपी ओलीको विरोध अर्को समूह (राजपा नेपाल), आज सत्तारोहणका लागि पर्खेर बसेको छ । कतिखेर सरकारमा बोलाउला र जाऔँला भनेर तयारी अवस्थामा छ । अर्थात् मधेशबाट सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने दुईवटा शक्ति ओलीको दायाँ र बायाँ छन् ।
विगतमा मधेशमा प्रवेश नै गर्न नदिने भन्नेहरु (उपेन्द्र यादव) सरकारमा सहभागी छन् । अझ सबभन्दा बढी केपी ओलीको विरोध अर्को समूह (राजपा नेपाल),आज सत्तारोहणका लागि पर्खेर बसेको छ ।
त्योभन्दा पनि पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीका घोर विरोधी थिए । आज उनी पनि ओलीको साथमा छन् । यो हो घरेलु राजनीतिको दृश्य ।
उता, ओलीले नाकाबन्दी फिर्ता नभएसम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिएपछि रहस्यमय तरिकाबाट नाकाबन्दी फिर्ता भएको थियो । आज भारत पनि ओलीकै लाइनमा छ । ओलीको शक्तिलाई भारतले पनि नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन ।
आज भारत पनि ओलीकै लाइनमा छ । ओलीको शक्तिलाई भारतले पनि नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन ।
देशका सबै शक्ति उनकै पछि लागेका छन्, भारतले पनि ‘इग्नोर’ गर्न नसक्ने भनेपछि उहाँ जतिको शक्तिशाली को हुनसक्छ ? त्यसैले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, प्रदेश प्रमुखको हेरफेर जस्ता कुरा नौलो होइन । शक्तिशाली नेताले गर्ने नै यस्तै हो ।
प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुनु,आफ्ना सल्लाहकारहरुलाई परिवर्तन गर्नु,मन्त्री हेरफेर गर्नु,कालापानी र लिपुलेकको कुरा पनि उठ्नु अर्थात् यी सबै कुरा एकैपटक आएको छ । यी सबै प्रसंगहरुले के कुरालाई संकेत गर्छ?
–यी सबै कुरालाई एउटै घानमा हालेर जटिल बनाउनु पर्ने जरुरी छैन । कलापानी र लिपुलेकको कुरा बेग्लै हो । भारतले कश्मीर घटनापछि आफ्नो नक्सालाई पुन:नक्शाङ्कन गर्‍यो । नेपाली काँग्रेसका लागि सौभाग्यको कुरा के भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला यो कुरा उठेको हो । काँग्रेसको सरकार भएको भए वामपन्थीहरु यति उग्र हुन्थे कि सरकारलाई दिउँसै घुँडा टेक्न लगाइदिन्थ्यो । काँग्रेसले आज यो कुरालाई उचाल्ने सौभाग्य पाएको छ । यो पुरानो मुद्दा हो, यसलाई केपी ओलीसँग जोड्न आवश्यक छैन ।
भारतले कश्मीर घटनापछि आफ्नो नक्सालाई पुन:नक्शाङ्कन गर्‍यो । नेपाली काँग्रेसका लागि सौभाग्यको कुरा के भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला यो कुरा उठेको हो । काँग्रेसको सरकार भएको भए वामपन्थीहरु यति उग्र हुन्थे कि सरकारलाई दिउँसै घुँडा टेक्न लगाइदिन्थ्यो ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति कुन अवस्थामा भएको थियो त्यो कुरा याद गर्नुस् त । काँग्रेसले जाँदा जाँदै आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको थियो । नेकपाले सरकार गठन गर्ने बित्तिकै हटाउनु पथ्र्यो । ढिलोचाँडो हटायो, यो पनि कुनै नौलो कुरा होइन । जसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ त्यसले आफ्नो अनुकुल राज्य सञ्चालन गर्न आफ्नो खालको नियुक्ति गर्न पाउँछ । यो धेरै ठाउँमा चल्दै आएको अभ्यास छ । हो, गठनबन्धनको सरकारमा रहेका अन्य दलसँग सल्लाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ नभएकै हो ।
तपाईंलाई यी विषय नौलो नलाग्न सक्छ । तर,राजनीतिबारे धेरै नबुझ्ने तर चासो राख्नेहरु यी घटनाक्रमहरुबाट सशंकित छन्नि!
– कुनै एक व्यक्ति यति धेरै शक्तिशाली भयो भने देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कुचित हुनसक्छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकार सङ्कुचित हुनसक्छन्, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुनसक्छ । तर अहिले नेपालमा त्यस्ता धेरै कुरा भइसकेका छैनन् ।
धेरै शक्तिशाली भएपछि नेताले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देख्ने खतरा हुन्छ । इन्दिरा गान्धीले भारतमा यस्तै गर्नुभएको थियो । अहिले मोदीले पनि त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ ।
छिमेकी भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले धेरै कुरा सङ्कुचित भएका छन् । नरेन्द्र मोदी त्यस्तै बलियो र प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । रुसमा पनि त्यस्तै छ । धेरै शक्तिशाली भएपछि नेताले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देख्ने खतरा हुन्छ । इन्दिरा गान्धीले भारतमा यस्तै गर्नुभएको थियो । अहिले मोदीले पनि त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ । मोदीको कार्यकालमा गौ रक्षाको नाममा करीब डेढ सयजनाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् ।
कुनै एक व्यक्ति वा एक पार्टी धेरै शक्तिशाली भयो भने त्यहाँको प्रजातन्त्र अलि कुण्ठित हुनसक्छ । विरोधीहरुमाथि आक्रमण हुनसक्छ । मान्छेमा त्रास पैदा हुनसक्छ । यस्तोमा सरकार र बजारबीच अपबित्र गठबन्धन हुनसक्छ । त्यस्तो गठबन्धन भयो भने महँगी बढ्ने, कमिशनका खेलहरु हुने, सरकारमा भएका व्यक्तिहरु र बजार मोटाउने तर राज्य दुब्लाउने अवस्था आउँछ । राज्य दुब्लाउनुको अर्थ समाज गरिब हुनु हो, अधिकारहरु कटौती हुनु हो ।
नेकपा र यो सरकार चीन निकट भएको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । यस अवस्थामा चीन सरकारले आफ्नो देशमा जे गरिरहेको छ,त्यो अभ्यासको प्रयास यहाँ भइरहेको हो?
–त्यति टाढा अहिले नजाऊँ । चीनको पृष्ठभूमि, व्यवस्था बेग्लै छ । नेपालको पृष्ठभूमि र व्यवस्था बेग्लै छ । नेपालमा चीनजस्तै साम्यवादी व्यवस्था, एक दलीय शासन लागु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यहाँ केपी ओलीको मात्र कुरा किन गर्नुहुन्छ?लोकमान सिंह कार्की शक्तिशाली हुँदा देशमा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो,ज्ञानेन्द्र शक्तिशाली हुँदा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो?
यहाँ केपी ओलीको मात्र कुरा किन गर्नुहुन्छ ? लोकमान सिंह कार्की शक्तिशाली हुँदा देशमा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो, ज्ञानेन्द्र शक्तिशाली हुँदा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो ? त्यसैले यहाँ केपी ओलीको कुरामात्र होइन, शक्तिशाली व्यक्तिको कुरा हो । कुनै व्यक्ति वा पार्टी शक्तिशाली भएपछि हुने यही नै हो ।
यो त्रास हो कि व्यवस्था परिवर्तनको अभ्यास हो?
–हाम्रो देशमा अलिकति छाडा पनि बढेको थियो । बीचमा स्थिर सरकार पनि थिएन । लामो समयसम्म अस्थिरताको राजनीति थियो । त्यसले समाजलाई एकप्रकारको मनोविज्ञान दिएको थियो । अहिलेको राजनीति स्थिर हुँदैछ । समाजलाई पनि मनोविज्ञान फेर्न अप्ठयारो लागेको हुनसक्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पहिलाको प्रधानमन्त्रीजस्तो काम गर्नुहुन्न नि । यो त मानवीय स्वभाव हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन सरकारको जस्तो, सूर्यबहादुर, तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भएको सरकारजस्तो काम गर्नुहुन्न नि !
भन्नाले अहिले प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस रक्षात्मक अवस्थामा छ,होइन?
–काँग्रेसलाई संख्याले रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । त्यो स्वाभाविक हो । निर्वाचनले जे दिएको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । उसले निर्वाचनबाट कमजोर भए पनि प्रतिपक्षीका भूमिका निभाइरहेको छ । कार्यकर्तालाई उत्साहित गरिरहेको छ ।
काँग्रेसले निर्वाचनबाट कमजोर भए पनि प्रतिपक्षीका भूमिका निभाइरहेको छ । कार्यकर्तालाई उत्साहित गरिरहेको छ ।
सत्तापक्ष निरंकुश भएपछि त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि काम गर्न सक्छ । कति गर्न सकेको छ/छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । काँग्रेसका केही युवा नेताहरुले कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने काम गरिरहेका छन् तर पार्टी रक्षात्मक अवस्थामै छ ।
तपाईलाई हामीले मधेश राजनीतिको विश्लेषकको रुपमा चिन्छौं । देशमा कुनै राजनीतिक हलचल भएपछि त्यसमा कहीँ न कहीँ मधेश जोडिएकै हुन्छ,अहिलेको राजनीतिमा मधेश कुन बिन्दुमा छ?
–यो संविधान जारी नभइञ्जेलसम्म नेपाली राजनीतिमा चारवटा शक्ति थिए । काँग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेशवादी दल । २०६३ पछि एमाले र काँग्रेस रक्षात्मक थिए भने मधेशवादी र माओवादी आक्रामक थिए । २०७० को निर्वाचनले परिस्थिति फेरिदियो । एमाले र काँग्रेसलाई आक्रामक स्थानमा ल्याईदियो भने माओवादी र मधेशवादी दललाई निकै कमजोर ।
मधेशवादी दललाई जतिञ्जेल माओवादीको साथ थियो,ऊ आक्रामक थियो,माओवादीले साथ छाडेर काँग्रेस र एमालेको साथमा गयो,मधेसी दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ।
१६ बुँदे सहमति नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डको टर्निङ प्वाइन्ट हो । १६ बुँदे सम्झौतामा काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेपछि नेपालको राजनीतिले बेग्लै बाटो लियो । त्यसपछि मधेसी दलहरु आक्रामक रहन सकेन, रक्षात्मक भयो । मधेशवादी दललाई जतिञ्जेल माओवादीको साथ थियो, ऊ आक्रामक थियो, माओवादीले साथ छाडेर काँग्रेस र एमालेको साथमा गयो, मधेसी दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । तैपनि आन्दोलनमा बल गरिरह्यो । संविधान निर्माणको क्रममा आन्दोलन चल्यो । जनताले साथ दिएका थिए । सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेशवादी दलले मतदान गरेपछि मधेशवादी दलको साख झनै खस्यो । नैतिक रुपमा मधेश राजनीति झन् कमजोर भयो । रणनैतिक रुपमा मधेशवादी दलका लागि नाकाबन्दी शक्ति पनि थियो र कमजोरी पनि । नाकाबन्दी मधेशीहरुका लागि बाध्यता तर कमजोर रणनीति ठहरियो । नाकाबन्दी खुलेपछि मधेश आन्दोलन तुहिएको थियो ।
रणनैतिक रुपमा मधेशवादी दलका लागि नाकाबन्दी शक्ति पनि थियो र कमजोरी पनि । नाकाबन्दी मधेशीहरुका लागि बाध्यता तर कमजोर रणनीति ठहरियो । नाकाबन्दी खुलेपछि मधेश आन्दोलन तुहिएको थियो ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा मधेसी जनताले प्रदेश २ मा शासन गर्न र केन्द्रमा संघर्ष गर्न मधेसवादी दलहरुलाई मत दिएका थिए । त्यसपछि केन्द्रमा प्रयोग भए । दुवै दलले ओली सरकारलाई समर्थन गरे । अहिले एउटाले फिर्ता लिएको छ भने संविधान संशोधन गराउने भन्दै अर्को दल सत्तामै छ । संविधान संशोधनको कुरा अब केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय हो । उहाँले चाहेपछि मात्र हुन्छ । मधेशवादी दलले हामी संविधान संशोधन गराउँछौं भनिरहेका छन्, त्यो कुन कारणले कसरी भनिरहेको छ मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन । अहिले पनि मधेशको राजनीति नेकपाको राजनीतिमा निर्भर भएको छ । यदि मधेशवादी दलले संविधान संशोधन गराउँछौं भनिरहेको छ भने त्यसका लागि नेकपामा निर्भर हुनुपर्छ । र, नेकपाले कस्तो ब्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनबाट देखिहालियो ।
संविधान संशोधनको कुरा अब प्रम केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय हो । उहाँले चाहेपछि मात्र हुन्छ । मधेशवादी दलले हामी संविधान संशोधन गराउँछौं भनिरहेका छन्,त्यो कुन कारणले कसरी भनिरहेको छ मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन । अहिले पनि मधेशको राजनीति नेकपाको राजनीतिमा निर्भर भएको छ ।
मधेशको शक्ति किन रक्षात्मक अवस्था पुग्यो होला?
–एकछिनका लागि त जोकोही पनि आक्रामक हुनसक्छ । तर को कति लामो समय आफ्नो शक्ति संचय गर्नसक्छ, यो महत्वपूर्ण कुरो हो । कुनै बेला प्रचण्ड निकै आक्रामक हुनुहुन्थ्यो तर परस्थितिले उहाँलाई रक्षात्मक बनाईदियो । अन्ततः अहिले केपी ओलीको साथ लिन बाध्य भयो ।
अन्तरिम संविधान जारी भएसम्म देशमा तीनटा शक्ति थिए काँग्रेस, माओवादी र एमाले । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि राजनीतिमा विशेष परस्थिति निर्माण भयो । छोटो समयमा मधेशवादी दलले जवर्जस्त रुपमा उपस्थिति जनाउँदै एउटा शक्तिको रुपमा स्थापित भयो । त्यसपछि मधेशवादी दल थपिएपछि चारवटा शक्ति भयो । चार शक्तिमा एमाले र काँग्रेस एक पोलमा, मधेशवादी र माओवादी अर्को पोलमा थिए ।
त्यतिबेलाको राजनीतिमा तीनटा कार्यसूची तय भएको थियो । एउटा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने, दोस्रो, सेना समायोजन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र तेस्रो, सत्तामा आ–आफ्नो अंश खोज्ने ।
तीनटा कार्यसूचीमा चार खेलाडी थिए । त्यसमा कसले के गर्ने भनि प्राथमिकता निर्धारण भयो । काँग्रेस र एमालेले जतिसक्दो छिटो सेना समायोजन गराएर माओवादीको शक्ति खोस्ने र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यलाई रोक्ने रणनीतिमा गएका थिए । माओवादी र मधेसवादी दलको प्राथमिकता निर्धारणमा त्यतिबेला त्रुटी भएको थियो ।
माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र सकेसम्म शान्ति प्रकृयालाई लम्ब्याउने प्राथमिकता तय गरेको थियो । त्यसका लागि सत्ता साझेदारी गर्नैपर्ने माओवादीको नीति थियो । तर त्यतिबेला मधेशवादी दलको प्राथमिकता नै निर्धारण भएन । मधेशवादी दल शान्ति प्रकृयाको सरोकारवाला पक्ष थिएनन् । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने प्राथमिकता बनाउनुपर्ने मधेशवादी दल बडो लम्पट तरिकाले सत्ताको राजनीतिमा फस्यो ।
त्यतिबेला मधेशवादी दलको प्राथमिकता नै निर्धारण भएन । मधेशवादी दल शान्ति प्रकृयाको सरोकारवाला पक्ष थिएनन् । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने प्राथमिकता बनाउनुपर्ने मधेशवादी दल बडो लम्पट तरिकाले सत्ताको राजनीतिमा फस्यो ।
२०७० को निर्वाचनसम्म आउँदा मधेसी दलहरु टुक्रा टुक्रामा विभाजित भए । माओवादी पनि दुई टुक्रा भएको थियो । २०७० सालको निर्वाचनले काँग्रेस र एमालेलाई बलियो अवस्थामा पुर्‍याइदियो । मधेशवादी दल रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । त्यतिबेला भारतले पनि माओवादीलाई साथ दिएनन् ।
उसलाई लागेको थियो कि माओवादी आफ्नो मुख्य दुश्मन हो । त्यसले गर्दा पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाएको थियो । त्यो भारतले नै गराएको थियो । तेस्रो र चौथो शक्तिलाई सत्ता बाहिर राख्यो । संसदीय राजनीतिमा, कसैको बहुमत नभएको सदनमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बिरलै सरकार बनाउँछन् ।
यी यावत परिस्थितिहरुले माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारेको थियो, परिणाम स्वरुप १६ बुँदे सहमति गर्नुपर्‍यो । माओवादीलाई मधेसी दलको साथ छाड्नुपर्‍यो र मधेश राजनीतिक कमजोर भयो ।
मधेशको राजनीति भारतमाथि एकदमै आश्रित भयो । पछि भारतले पनि साथ छाडेपछि धर्मराएको हो ।
मधेसी दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको कारण बलियो संगठन निर्माण नहुनु पनि थियो । अर्को कुरा मधेशको राजनीति भारतमाथि एकदमै आश्रित भयो । पछि भारतले पनि साथ छाडेपछि धर्मराएको हो ।
अर्थात् मधेशको राजनीतिलाई अहिले पनि एउटा टेकोको आवश्यकता छ,हैन?
–टेकोको होइन, आफैँ बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आफू बलियो नभएसम्म केही हासिल गर्न सकिँदैन । अर्काको टेकोमा धेरै दिनसम्म राजनीति गर्न सकिँदैन ।
नयाँ संविधानको घोषणा,आन्दोलनको निराशाजनक बैठान,तीनै तहको निर्वाचन पश्चातको देश र मधेसको स्थितिको वास्तविक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । सबै दलको लक्ष्य पुरा भयो तर मधेशवादी दल जहाँको त्यही छ ।
२०६४ देखि २०७२ को बीचमा मधेश राजनीति जति उत्साहित र जागृत थियो, त्यो कोर्स समाप्त भइसकेको छ । २०७४ पछि देश र मधेशको राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ ।
नयाँ संविधानको घोषणा, आन्दोलनको निराशाजनक बैठान, तीनै तहको निर्वाचन पश्चातको देश र मधेसको स्थितिको वास्तविक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । सबै दलको लक्ष्य पुरा भयो तर मधेशवादी दल जहाँको त्यही छ ।
प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार छ । ५० वटाभन्दाबढीपालिकामा पनि सरकार छ तर आजसम्म त्यसबाट सामाजिक रुपान्तरण कसरी गर्ने भनीदुईटा दल बसेर छलफल गरेको तपाईले सुन्नुभएको छ?
प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार छ । ५० वटाभन्दा बढी पालिकामा पनि सरकार छ तर आजसम्म त्यसबाट सामाजिक रुपान्तरण कसरी गर्ने भनी दुईटा दल बसेर छलफल गरेको तपाईले सुन्नुभएको छ ? राजनीति केका लागि गर्ने भन्ने कुरा त स्पष्ट हुनुपर्‍यो नि ।
दुईटै दलको लक्ष्य एउटै भए पनि,सरकारमा सँगै भए पनि एकअर्काको प्रतिपक्षी जस्तो देखिनुको कारण के हुन सक्छ?
–मधेश राजनीतिको कुरा गरेजस्तै मधेशी समाजको पनि विश्लेषण हुन आवश्यक छ । मधेसी समाजमा व्यक्ति–व्यक्तिको बीचमा धेरै राम्रो सम्बन्ध हुँदैन । तर काठमाडौँ विरुद्धको लडाइँ लड्ने बेलामा एक ठाउँमा हुन्छ । मधेशी एकता जिन्दावाद, तर कति बेला ? के का लागि ? त्यो स्पष्ट छैन । मधेशको विकासका लागि कि काठमाडौँको विरोधका लागि ? त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
मधेसी समाजमा व्यक्ति–व्यक्तिको बीचमा धेरै राम्रो सम्बन्ध हुँदैन । तर काठमाडौँ विरुद्धको लडाइँलड्ने बेलामा एक ठाउँमा हुन्छ । मधेशी एकता जिन्दावाद,तर कति बेला?के का लागि?त्यो स्पष्ट छैन ।
मधेशका कुनै दुई नेताको बीचमा राम्रो सम्बन्ध छैन । चाहे कुनै एकै पार्टीभित्र होस् वा दुईटा फरक फरक पार्टीका नेता नै किन नहोस् । दुईजना पत्रकार, दुईजना नागरिक समाज अगुवाबीचमा सम्बन्ध राम्रो देखिए पनि विश्वासको संकट हुन्छ । यो समाज नै यस्तै हो । मधेसी दलहरु त्यही समाजका प्रतिनिधि भएकोले एक अर्काको सहयोगी भन्दा प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिएको हो । यो नौलो कुरा होइन । वास्तवमै पनि दुई पार्टीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन ।
राजपा नेपालले समाजवादी पार्टी सरकारबाट नबाहिरिएसम्म एकता हुन सक्दैन भनिरहेको छ तर समाजवादी पार्टीले एकतालाई प्राथमिकता नदिएजस्तो देखिन्छ,सरकारबाट बाहिरिएको छैन,किन होला?
–मलाई लाग्छ अरु केही राणनीति लुकेको छ तर त्यसबारे बोलिहाल्ने बेला अहिले भएको छैन । तर समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि सरकारमा राजपा जान्छ भन्नुमा कुनै दम छैन ।
समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि सरकारमा राजपा जान्छ भन्नुमा कुनै दम छैन । राजपाले पनि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र एकता गर्छु भन्नु भनेको जीवनभर मांशाहारीले शाकाहारीको अभियान चलाए जस्तै हो । दुबैले झुठो बोलिरहेका छन् ।
राजपाले पनि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र एकता गर्छु भन्नु भनेको जीवनभर मांशाहारीले शाकाहारीको अभियान चलाए जस्तै हो । दुबैले झुठो बोलिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेरमा समाजवादी पार्टीसँग जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो,त्यसका बाबजुद सरकारमा समाजवादी पार्टी बसिरहँदा सत्ता मोहमा फसेको आरोप लाग्न थालेको छ,के सही हो?
–आजसम्म मधेशको राजनीतिमा संघर्षको राजनीतिमात्र गर्ने र सत्तामा कहिले नजान्ने भन्ने मान्छे भेटिएको छैन । सत्ताको बारेमा सबैको नजर लोभीपापी देखिएको छ । मधेशमा राजनीति गर्ने नेताहरु आन्दोलनमा चर्को कुरा गर्ने र सत्ताको कुरा आउने बित्तिकै कमजोर हुन्छन् । त्यसको बारेमा छुट्टै तर गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।
मधेशमा राजनीति गर्ने नेताहरु आन्दोलनमा चर्को कुरा गर्ने र सत्ताको कुरा आउने बित्तिकै कमजोर हुन्छन् । त्यसको बारेमा छुट्टै तर गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।
मन्त्री हेरफेरले गर्दा समाजवादी पार्टीमा सरकार छाड्ने चर्चा चलेको थियो तर तत्काल सरकार नछाड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ,के यो उपयुक्त निर्णय हो?
–हेर्नुस्, राजनीतिमा उपयुक्त, अनुपयुक्त, राम्रो, नराम्रोजस्ता कुरा हुँदैन । यो प्रवचनमा बाबाहरुले प्रयोग गर्ने शब्दहरु हुन् । राजनीति जित–हारको खेल हो । राजनीतिमा विदुरको नीति हुन्छ, सकुनीको चाल हुन्छ, कृष्णको लिला हुन्छ । यहाँ सबथोक हुन्छ । समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई जस्ता नेताहरुले लिनु भएको निर्णय उपयुक्त वा अनुपयुक्तमा विश्लेषण गर्नु हुँदैन ।
Nov. 28, 2019, 6:13 p.m. narayan bhatt
अहिले भने तुल नारायण शाह जी ले सटिक र टतस्थ कुरा गरका छन्